Sawiro:- Banaanbax lagu taageerayay mooshinka kasocda Puntland oo kadhacay Garoowe. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSawiro:- Banaanbax lagu taageerayay mooshinka kasocda Puntland oo kadhacay Garoowe.
July 24, 2019 marqaan Faalloyinka, Puntland, Soomaliya, Wararka maanta 0
Muddaharaad lagu taageerayo mooshin xilka qaadis ah oo Baarlamanka Puntland ka gudbiyay xubnaha Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta ka dhacay magaalada Garoowe.
Golaha wakiilada Puntland ayaa la filaya in ay maalinta berriya ka doodan mooshin xilka qaadis ah ee ka dhanka ah xubnaha Maxkamadda sare ee Puntland.
Mudanayaasha ayaa xubnaha Maxkamadda sare ku eedeeyay in ay caddaalad-darro iyo musuq maasuq baahsan ku sameeyeen shaqada Garsoorka.